Ny fampahalalana ofisialin'ny Galaxy S8 sy S8 + dia tonga amin'ny hazavana | Androidsis
Mazava avokoa ny fampahalalana ofisialin'ny Galaxy S8 sy S8 +
Roa andro monja alohan'ny fanombohana ny Galaxy S8 sy S8 + manaraka, kasaina hatao amin'ity 29 martsa ity, efa tafaporitsaka ny fampahalalana ofisialy rehetra momba azy ireo, ao anatin'izany ny toetra teknika, ny kojakoja ary sary vaovao an-gazety.
Navoaka tamin'ny sary ireo sary vaovao Roland Quandt ary asehoy ny sainam-pirenena vaovao amin'ny loko isan-karazany, anisan'izany ny mainty, manga, volafotsy ary volondavenona. Ny tontonana aloha sy aoriana koa dia hita amin'ny an-tsipiriany, miaraka amin'ny tifitra mazava an'ny sensor sensor, fantsom-pitaovana, flash LED ary fakan-tsary aoriana.
Raha ny fahitana azy, Samsung dia mikasa ny hanome ny mpampiasa ny "fampiasa tsara indrindra amin'ny faritry ny Galaxy" miaraka amina "endrika vaovao" mba hanadinoan'ny tsirairay ny fiasco izay ilay Galaxy Note 7. Ary koa, io tatitra io ihany koa dia miaraka amin'ny lisitr'ireo toetra ara-teknika amin'ny antsipiriany. ny fitaovana ary misy antsipiriany vaovao.
1 Ny toetra ara-teknikan'ny Galaxy S8 sy S8 +
1.3 Iris scanner sy sensor sensor
1.4 Fanamarinana IP68
1.5 Processorera, RAM ary kojakoja finday hafa
2 Programa Guard S8 ary fiantohana maharitra
3 Ny vidiny sy ny kojakoja hafa an'ny Galaxy S8 sy S8 +
4 Latabatra famaritana
5 Sarin'ny Galaxy S8 sy S8 + bebe kokoa
Ny toetra ara-teknikan'ny Galaxy S8 sy S8 +
Raha sanatria ka tsy naharaka ny vaovao farany momba ny Galaxy S8 ianao dia miverina ny vaovao izay vao nivoaka manamafy famaritana efa fantatray, araka ny fanao S8 mahazatra efijery Super AMOLED mivelatra 5.8-inch, raha mbola mitazona ny famolavolana sy ny haitao mitovy amin'ny S8 + kosa ny SXNUMX + afa-tsy ny habeny ihany 6.2 santimetatra.
Ny fanapahan-kevitr'ireo fitaovana roa ireo dia hijanona ao 2.940 x 1.440 teboka ary ny tahan'ny lafiny dia 18.5: 9, amin'ny fomba mitovy amin'ny LG G6.
Mikasika ny fakantsary, samy finday avo lenta hitazona vahaolana 12 megapixel (ny piksela tsirairay dia ho 1.4µm ny habeny) ary hanome a aperture f / 1.7, autofocus Dual-Pixel, fanamafisana ny sary optique ary ny fandraisam-peo video 4K, na dia toa nisy an'ity rafitra ity aza ny rafitra of laser autofocus ho an'ny marimarina kokoa.
Fakan-tsary aloha Tsy vitan'ny nampitombo ny fanapaha-kevitra ho 8 megapixels (amin'ny S7 dia 5 MPx), fa koa manana aperture an'ny F / 1.7 sy ny rafitra autofocus izay hanampy "hisambotra toe-javatra tena mavitrika".
Iris scanner sy sensor sensor
Etsy ankilany, misy ihany koa ny scanner iris izay hamela mamoha mora foana ny terminal rehefa tsy azo tratrarina ny fampiasa ny fantsom-panafody.
Ankoatra ny scanner iris, Samsung koa dia manana fitaovana ho avy miaraka a sensor eo an-tanan-tànana eo aloha manana fanohanana izany fampiharana misokatra sy manidy.
Ny fepetra fiarovana hafa dia ny serivisy an'ny Folder azo antoka na Folder azo antoka, izay hitantsika ihany koa tao amin'ny Galaxy Note 7, izay ahafahan'ny mpampiasa mitahiry fampiharana, fisie ary data hafa saro-pady.
Ny rindrambaiko Secure Folder dia misy ihany koa amin'ny sisin'ny Galaxy S7 sy S7 raha toa ka liana ianao, noho izany dia tsy fiasan'ny terminal vaovao fotsiny izany.
Ireo fitaovana roa ireo dia hanana fanamarinana ny Fanoherana IP68 amin'ny rano sy vovoka, amin'ny fomba mitovy amin'ny Galaxy S7. Amin'izany no ahafahanao manondrika azy ireo anaty rano amin'ny halalin'ny 1.5 metatra mandritra ny 30 minitra.
Na eo aza izany dia hanohy hanolotra kapila finday 3.5mm sy mpandahateny stereo ny finday avo lenta.
Processorera, RAM ary kojakoja finday hafa
Eo amin'ny lafiny fitaovana, ny Galaxy S8 sy S8 + dia hampiditra a Processeur Exynos 8895 valo fotony miaraka amin'ny hafanana 2.5GHz (amin'ny tsena sasany dia hanana ny SoC izy ireo Qualcomm Snapdragon 835), RAM 4GB, fitehirizana anatiny 64GB ary slot ho an'ny karatra microSD hatramin'ny 64GB.
Raha eo amin'ny fifandraisana, ny fitaovana roa dia hanana mody Dual Band Gigabit Wi-Fi, Fanohanana LTE, GPS, Bluetooth 4.2, NFC ary seranan-tsambo USB-C.
Farany, Battery ny terminal dia hanana fahaizana 3000mAh ao amin'ny Galaxy S8ary 3500mAh ao amin'ny S8 Plus. Samy mamela ny famerenam-bola haingana amin'ny alàlan'ny charger vaovao azo ovaina izay tafaporitsaka tato ho ato ary azonao jerena amin'ity sary manaraka ity.
Galaxy S8 Accessories - Wireless Charger, DeX Station ary Battery Pack
Programa Guard S8 ary fiantohana maharitra
Mba hamerenana ny fahatokisan'ny mpanjifa ny tsena sasany dia mikasa ny hanambara programa fanohanana ara-teknika vaovao antsoina hoe Guard S8 izay mamela ny mpampiasa hanana amboary ny findainao ao anatin'ny adiny roa monja.
Ho fanampin'izay, hanolotra ihany koa ny orinasa fanitarana ny fiantohana ofisialy any amin'ny firenena sasany ary fanovana efijery maimaimpoana raha sanatria vaky, miaraka amin'ny safidy fanohanana lavitra.
Ny vidiny sy ny kojakoja hafa an'ny Galaxy S8 sy S8 +
Ny vidin'ny ofisialy an'ny Galaxy S8 sy S8 + dia nambara taloha kelin'izay, saingy tadidintsika indray izy ireo. Ny maodely mahazatra dia manana a vidiny ambany 799 euro, raha S8 Plus kosa 899 euro.
Toy izany koa, Samsung dia hanolotra kojakoja mahaliana sasany, toa ny Gara DeX, izay ahafahan'ny mpampiasa mankafy maody iray mitovy amin'ny Windows 10 Continuum.
Na dia azo antoka aza fa ireo no antsipiriany izay holazain'i Samsung amin'ny 29 martsa, tokony holazaina fa mety hisy tsy ampoizina foana ary hiverina miaraka amin'ireo fanambarana ofisialy sy ny vaovao rehetra natolotr'i Samsung tao anatin'ny roa andro isika.
efijery 5.8-mirefy miolikolika Super AMOLED 6.2-mirefy miolikolika Super AMOLED
vahaolana 2960 x 1440 pika 2960 x 1440 pika
processeur Exynos 8895 / Snapdragon 835 Exynos 8895 / Snapdragon 835
fitehirizana 64GB + microSD 64GB + microSD
Fakan-tsary Rear 12 MPx miaraka amina Dual-Pixel Autofocus / Optical Stabilization / Laser Autofocus / F / 1.7 ary horonantsary horonantsary 4K 12 MPx miaraka amina Dual-Pixel Autofocus / Optical Stabilization / Laser Autofocus / F / 1.7 ary horonantsary horonantsary 4K
Fakan-tsary eo aloha 8 MPx miaraka amin'ny vatan'ny autofocus sy f / 1.7 8 MPx miaraka amin'ny vatan'ny autofocus sy f / 1.7
Conectividad 4G LTE + Wi-Fi Dual-Band ac / a / b / g / n + Bluetooth 4.2 (miaraka amin'ny apt-X sy LE) + GPS + NFC + USB-C 4G LTE + Wi-Fi Dual-Band ac / a / b / g / n + Bluetooth 4.2 (miaraka amin'ny apt-X sy LE) + GPS + NFC + USB-C
Refy sy lanjany 148.9 x 68.1 x 8.0 mm / 151 grama -
Rafitra fandidiana Android 7.0 Nougat Android 7.0 Nougat
vidiny 799 € 899 €
Sarin'ny Galaxy S8 sy S8 + bebe kokoa
Làlana feno mankany amin'ny lahatsoratra: Androidsis » Fitaovana Android » Finday » Samsung » Mazava avokoa ny fampahalalana ofisialin'ny Galaxy S8 sy S8 +
Mahavariana fotsiny .. Fa amin'izay hitako fa hofoanan'izy ireo ny bokotra fitetezana, noho izany azo antoka fa ho ampahany amin'ny efijery izy ireo ary izany indrindra no halako momba ny Huawei sy Xperia .. Diso: (…,
Ahoana ny fomba hanokafana haingana kokoa ny fakantsary Galaxy S8
[APK] [Tsy navoaka] Fampiharana "El Tiempo" ho an'ireo mpanandramana beta izay tena tsara tokoa